Fihariana: sahirana izao ny mpanao biriky | NewsMada
Fihariana iray goavana be mpanao eto amin’ny faritra Analamanga ny fanaovana biriky tanimanga eny an-tanimbary. Mandritra maintany, aorian’ny miaka-bary, ny fiasana fanaovana biriky, manomboka ny volana mey hatramin’ny volana septambra. Miankina amin’ny toetr’andro amin’ny ankapobeny fa miankina amin’ny toe-tany. Maharitra telo volana eo ho eo ny asa, manomboka amin’ny fihadiana tany, ny fandrafetana sy ny fandorana azy.
Fianakaviana tompon’ny tanimbary ihany no miasa azy na mampanofa ny taniny. Ao ny efa za-draharaha hatramin’ny taranaka mifandimby mivelona amin’io asa fanaovam-biriky io isan-taona. Faritra maromaro ny hiasana amin’izany, araka nambaran’ireo mpanao azy. Samy ahitana izany eny Atsimondrano sy eny Avaradrano. Fantatra anefa fa tsy maharaka intsony ny akora tanimanga ka tsy maintsy manampy tany hafa, mitaona tany mihitsy ireo mpanao biriky ireo. Misy karazany ireo tany ireo: lamoka, mangakely, tain-drihitra, loham-pototra, sy ny maro hafa.
Tsy latsaky ny 100 Ariary
Voalazan’ireo mpiasa biriky fa tsara avokoa ireo. Izy ireo moa mivarotra dia tsy maintsy izay ny lazainy fa ny mpanao trano matihanina, mahafantatra tsara ny tena ilaina, miankina amin’izay trano hatao. Miankina amin’izay koa ny vidiny. Amin’ny ankapobeny, tsy latsaky ny 100 Ariary ny biriky iray eny am-potony, miampy ny saram-pitaterana io. Ankoatra ny fiara, misy mitondra amin’ny sarety, araka izay toerana aleha ny sarany. Milaza fa sahirana ankehitriny ireo mpanao biriky, noho ny antony maro: tsy ampy ny tany sy ny rano, lafo ny kitay fandorana azy. Izany rehetra izany, noho ny fiovan’ny toetr’andro (zahao ny lahatsoratra Fivadihan’ny toetr’andro).